सुनसरीको इटहरी–१३ मा महिनाको एक हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी लिएको माटोले पोतिएको एउटा झुप्रो कोठा। भान्छा त्यहीँ, ओछ्यान त्यहीँ, अनि सानो पसल पनि त्यहीँ। त्यही पसलबाट सामान बेचेर जिविकोपार्जन गर्ने परिवार अहिले शोकमा डुबेको छ। १६ वर्षीया सनम आचार्य र उनकी ११ वर्षीया बहिनी स्वेच्छालाई छाडेर उनीहरुकी आमा राधा परलोक भइन्। लामो समयदेखिको बाथ रोगसँग जुध्दै आएकी राधाको घरमा त्यस दिन पुजा थियो। ‘ग्रहशान्तिको पुजा थियो, पुजा पनि सकियो, ममि पनि जानुभयो,’ सनमले भनिन्, ‘बिरामी हुनुहुन्थ्यो, तर ऐ’य्या–आ’त्था कहिल्यै गर्नुभएन।’
राधाको मृ’त्यु भएको सात दिनसम्म पनि राधाको घरतिरका आफन्तहरु कोही आएनन्। अन्ततः छोरीहरुलाई नै किरिया बस्न लगाउने निर्णय
केही वर्षदेखि श्रीमती र छोरीहरुलाई छाडेर बाहिरै बसेका उनीहरुका बुवाको पनि एक वर्षअघि मृ’त्यु भएको थियो। आफन्तहरुले समेत हेला गर्ने उनीहरुको दुःखेसो छ। राधाको मृ’त्यु भएको सात दिनसम्म पनि राधाको घरतिरका आफन्तहरु कोही आएनन्। किरिया बस्ने पनि कोही नभएपछि अन्ततः छोरीहरुलाई नै किरिया बस्न लगाउने निर्णयमा पुगेको सनमकी ठूलीआमा शोभा कट्वालले बताइन्।
काजकिरिया सकिएपछि कसले पाल्छ त? ‘ठूलोममीकोमा बस्छु,’ सनमले आँखा भरी आँशु पार्दै
तर छोरीले पिण्ड दिन नहुने भन्दै पण्डितहरुले पुजा गर्नै मानेनन्। ‘कसैले के भने, कसैले के भने’ कट्वालले भनिन्, ‘हामी सबैले मानेको कुरो पण्डितले मानेनन्।’ किरिया गर्ने पण्डित नभेटेको थाहा पाएपछि इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले घरमै पुगेर सहजिकरण गरिदिइन्। ‘तीन, चार जना पण्डितले किरिया नगर्ने भनेका थिए,’ गौतमले भनिन्, ‘मैले कुरा गरेपछि उपमेयरले नै भनेपछि गरिदिन्छु भनेर एक जनाले भन्नुभयो।’ बिहीबारदेखि छोरीहरुले आमालाई पिण्ड दिन थालेका छन्।
आर्थिक स्थिति कमजोर रहेको कारण गाउँलेले सहयोग गरिरहेका छन्। यता इटहरी उपमहानगरपालिकाले समेत किरिया खर्च सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ। बुवाले छाडेर गएपछि एक्ली आमाको पालन पोषणमा हुर्किँदै गरेका दुई बालिकाहरु अविभावकविहिन बनेका छन्। काजकिरिया सकिएपछि कसले पाल्छ त? ‘ठूलोममीकोमा बस्छु,’ सनमले आँखा भरी आँशु पार्दै भनिन्।
प्रकाशित मिति December 7, 2019